सुरुमा शब्द थियो ... र यो सरल बयान यो सिर्फ यति मतलब केहि छैन, र पनि ठूलो महत्त्व, एक प्रमुख भूमिका खेल्दै छ जोड दिन्छ।
मा शब्द मान्छे को जीवन लगभग सधैं तिनीहरूलाई साथ दिनु। सबै पछि, तिनीहरूले - जानकारी प्रत्यक्ष प्रसारण को बेबदल तरिका हो। शब्द यसलाई राख्नु छन् - एउटा अचम्मको प्रत्येक व्यक्ति को लागि, विचार को उपकरण, र जिब्रो - एकीकृत सिस्टम सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार सम्बन्धित, एक हजार वर्ष को परिणाम हो जो।
शब्द - यो चिन्ह हो। यसलाई व्यापक बोली प्रयोग गरिन्छ जो भाषा को एक एकाइ, रूपमा परिभाषित गरिएको छ। मौखिक सम्पर्क पक्षमा संचार साधन को एक माध्यम रूपमा शब्द, कि यसको आकार मा मौखिक छ। कल वस्तुहरु र कुराहरू, कार्यहरू, र यति मा संकेत: यो भाषा को निस्क्रियगर्नुहोस् समारोह कार्य गर्दछ। तर सुक्खा र आधा को परिभाषा कसरी विशाल शब्द "शब्द" र धेरै तपाईंले कसरी मदत संग सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ व्याख्या छैन। यो नै धारण कति बुझ्न क्रममा, तपाईं धेरै bowels मा भित्र पस्नु गर्न, थप बुझ्न आवश्यक छ।
भाषा, बोली र आफ्नो लिंक
पहिले नै उल्लेख, शब्द - एक घटक भाषा र बोलीको। एकै समयमा यो आफ्नो लिंक छ। आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति - यो गर्दा बोली भाषा, एक व्यक्ति बिना विकास गर्न सक्ने ज्ञात छ। मार्फत यो तथ्यलाई बाहेक व्यक्तिगत को psyche को विशिष्टताको, प्रकट गर्न सक्छन् प्रयोग गरेर जानकारी उत्पादन नियन्त्रण र अन्यसँग संचार को विनियमन हस्तान्तरण गरिनेछ।
मानिसहरूको जीवनमा शब्दहरूको भूमिका निकै मा जो र जहाँ यो प्रयोग को मूल्य निर्भर गर्दछ। यसको प्रभाव यो घटना को सबै पक्षहरू विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ विचार गर्दा किन छ।
भाषा को मूल रहस्य मा shrouded छ। निस्सन्देह, सबै भन्दा भाग को लागि मानवता लामो मिथक र सबै सम्भव विकल्पहरू भाषा भन्ने दन्त्यकथा मा विश्वास को चरण बाँचे छन् - यो स्वर्गबाट परमेश्वरको वरदान हो; जो मानिसहरू विदेशी प्राणी दिनुभयो सम्पत्ति वा; साथै आफैमा आउन क्षमता, रूप; अन्तमा, विकास को वर्ष को परिणाम, सबै भन्दा तार्किक रूपमा उत्तरार्द्ध छनोट। तर यस्तो व्याख्या - यो केहि व्याख्या छैन, एक वैज्ञानिक सिद्धान्त लागि पनि सामान्य छ।
तर वैज्ञानिकहरू unanimously तपाईं एक भाषा हटाउन भने, एक व्यक्ति जस्तै हुन ceases कि समर्थन। किनभने यदि यो व्यक्तिगत एक विशेषता, त्यसपछि यो जटिल प्रणाली भन्न सकिन्छ - राष्ट्रिय सम्पत्ति, नस्ल, सम्पूर्ण सभ्यता।
समाजमा वाणी को भूमिका
यो सामाजिक विकास भएको कुनै गोप्य छ र अझै पनि कारक को एक विशाल संख्या मुछिएको लामो र laborious प्रक्रिया छ। संचार - किनभने मौखिक अन्तरक्रिया समाज र यसको प्रगति को अस्तित्व को लागि एक आवश्यक अवस्था हो, पछिल्लो एक छैन। यो संसारमा जानकारी स्थानान्तरण सुनिश्चित र यस कारण व्यवहार मा ज्ञान, आफ्नो विस्तार, विश्लेषण, वर्गीकरण, आवेदन संग्रह र अधिक हुन सक्छ। शब्द जो कहिले काँही हाम्रो संसार परिवर्तन गर्न विचार समावेश विचार, लुगा लगाउनु। र यो सिर्फ अविश्वसनीय छ।
ती वचनहरू मानिसहरूको जीवनमा शब्दहरूको भूमिका सधैं अत्यधिक सराहना गरिएको छ भनेर प्रमाणित। तर मात्र त्यो, तर पनि यसको शक्ति।
त्यहाँ धेरै कुराहरु भूमिका शब्दहरू आफ्नो जीवनमा खेल्ने बारेमा जवाफ प्रश्न हो। र जवाफ छ - सबै भन्दा, तर सधैं सकारात्मक छैन। "- सुन मौन" वा उदाहरण, प्रसिद्ध लागि "वक्ता -। एक जासूस लागि एक godsend" सायद यहाँ दुविधा वजन छैन, र के दिशा मा, यो भूमिका लिन्छ? Sages यो खतरनाक हुन सक्छ भनेर शब्द शक्ति पनि ठूलो छ कि चेतावनी दिए।
शब्द र यसको अर्थ को अर्थ
विरलै शब्द एक अर्थ छ। अलग, लिएको सन्दर्भ बाहिर लिएको, यो एउटा प्रत्यक्ष बोलीमा बुझे गर्न सकिन्छ कि संभावित को संरक्षकको बन्नेछ। मात्र यदि शब्द अर्थमा बनाउँछ।
यो मात्र होइन विशिष्ट मूल्य एक वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई लागू हुन्छ। आखिर, त्यहाँ एक लाक्षणिक अर्थमा, अझै पनि छ यो एक पटक फेरि यो लेख, एक तथ्य उल्लेख प्रमाणित गर्छ: यो कुरा, व्यक्ति यसलाई आफ्नो चरित्र दिन्छ, बरु केवल एक सूची भन्दा, भन्दै अरू कसैले गर्न व्यक्तिगत डाटा स्थानान्तरण गर्न जरूरत, अद्वितीय छ।
"शब्द - एक भँगेरा छैन ..."
शब्द जताततै छन्। दैनिक कुराकानीमा, पुस्तकहरू मा गीतहरू मा, चलचित्र मा, विज्ञापन मा, मेरो विचार मा। र जतिसुकै ठूलो विशिष्ट चयन व्यक्ति आफ्नो शब्दावली, यो महानता को सम्पूर्ण भाषा कवर गर्दैन। र यो संसारको सबै समय को खजाना को केही भन्न मात्र एकल भाषा हो!
तर यो उपहार यस महानता (र यो निश्चित एक उपहार, शाब्दिक छैन यद्यपि, भाषा को मूल पहिले नै बस माथिको लेखमा छलफल गरिएको छ किनभने छ) को निपटान गर्न सक्षम हुनुपर्छ। म तपाईंलाई के भन्न, त्यसपछि, हरेक शब्द प्रतिबिम्बित गर्न, लाग्छ। साथै यो ठीक बुझे गर्न ताकि बोल्न आवश्यक छ, यो थप अर्को ध्यान दिएर र के उहाँले स्रोत बताउन, क्याच चाहन्छ सुन्न महत्त्वपूर्ण छ। संचार को कला - यो कुनै मजाक छ। यो संवाद, reciprocity समावेश छ।
तपाईं शब्दहरू के गर्न सक्नुहुन्छ प्रमाणित कि वक्ता मान्छे, - eloquence को मालिकको। भीड विद्रोह गर्न, हेर्नुहोस्, शान्त को आफ्नो कुरा विश्वस्त गर्न विपरीत, रिस गर्न, निर्देशन गर्न, नियन्त्रण, पूर्ण नियन्त्रण उठाउनु वा।
शब्द र शिक्षा
मानिसहरूको जीवनमा शब्दहरूको भूमिका मात्र ठूलो, तर पनि एकदम वैविध्यपूर्ण छैन: यो आफ्नो जीवनको हरेक क्षेत्र। कि संचार किनभने सामाजिक मामलामा आफ्नो विकास को एक व्यक्ति को लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ बाहेक, यसलाई प्रभाव पेशेवर क्षेत्रमा महत्वपूर्ण छ। तपाईं गहिरो खन्न भने, यो केवल नियम र terminoidy, तर पनि सिक्ने को धेरै विचार र शब्द संग यसको सम्बन्ध, गर्न सही हुन फिर्ता जान्छ - शब्दावली।
लेख शब्द को अर्थ गलत बुझयो कि सकिँदैन, र यो एउटा समस्या, को पाठ्यक्रम, जनक छ, तर यो psychosocial कारक गाँसिएको छ भन्नुभयो। एकै समयमा यो तपाईं सबै बुझ्न सक्दैन भन्नुभयो। त्यसपछि यो बाधा ज्ञान को वास्तविक कमी मा समावेश हुनेछ किनभने शब्द को मूल्य प्रयोग जसमा, अब महत्त्वपूर्ण छ।
trainability मा प्रभाव
स्थिति को निम्न मोडेल विचार गर्नुहोस्: "द ह्यान्डल लायक5rubles र पेन्सिल छ - 8": प्रथम grader यसो जो कार्य, पढ्छन्। उहाँलाई यो सबै स्टेशनरी छन् कति गणना गर्न आवश्यक छ। एक आतंक मा एक बच्चा - त्यो कसरी गर्न थाहा छैन। र यो वाहेक को नियम व्याख्या गर्न आवश्यक रूपमा धेरै हुन सक्छ, तर यो कुनै लाभ हुनेछ। किन? उहाँले यो "स्टेशनरी" के मतलब थाहा छैन। एक अनुभवहीन शिक्षक "गैर-गणितीय लेख्नुहोस् हुनेछ , मन" र, सामान्य मा, एक मूर्ख बच्चा स्थायी उहाँले horoshn छैन कि विचार मा नै स्थापना।
केवल एक मानवीय प्रोफाइल, यसलाई comprehensively महत्त्वपूर्ण हो - अर्थ विज्ञान यो उदाहरण स्पष्ट देखाउँछ।
शब्द निको पार्न, तर तपाईं मार्न सक्नुहुन्छ
सर्तहरू "भाषण" र "संचार" को विवरण आफ्नो लक्ष्य भनेर जिद्दी छ - स्थानान्तरण र जानकारी को विनिमय। र यो पक्कै पनि साँचो हो। तर, यो परिभाषा सान्त्वना, शब्द कुनै न कुनै वा कोमल हुन सक्छ कि उल्लेख गर्न असफल वा असह्य पीडा हुन्छ। यो एक latent गर्मी हुन सक्छ, र यो पनि अधिक खुट्टाको औंलासम्म देखि चिसो खन्याउन गर्न सक्नुहुन्छ। एक शब्द यदि यो अर्थमा गर्नेछ, संसारको धारणा बारी गर्न सक्षम छ। यो सुने जो जो यो भने एक, बनेको छ जो शब्द, अर्थ छ। र त्यहाँ आफ्नो कान मा केवल एक घण्टीको, छैन महत्वपूर्ण केहि खाली शब्दहरू धेरै पनि छ। र कसरी यो भन्न सकिन्छ मात्र "निस्क्रियगर्नुहोस् समारोह कार्य कि एकाइ"? यो हो कि यो शक्ति तोड्न गर्न सक्षम सकल संसारको जादू र सूक्ष्म कुरा गर्न धेरै नजिक छ।
सबै भन्दा लोकप्रिय अंग्रेजी शब्द: सूची
विदेशी भाषा कसरी सिक्ने।
को भनाइ को अर्थ, "अमृत, प्रेम र चिसो जस्तै तपाईं"
"द दूत" बैंक क्रेडिट कार्ड
हात सामान मा तरल को परिवहन को नियम: सुविधाहरू, आवश्यकताहरु र rekkomendatsii
खुट्टा (खुट्टा erysipelas) मा Erysipelas। उपचार: लोक उपचार। Erysipelas खुट्टा: लक्षण र उपचार लोक उपचार को (बिरुवा, षडयंत्र, रातो झण्डा)
के लागि होस्ट फाइल हो?